Nin kufsaday gabar oo dabadeed dilay oo toogasho lagu fuliyay gudaha magaalada Garbahaaray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaNin kufsaday gabar oo dabadeed dilay oo toogasho lagu fuliyay gudaha magaalada Garbahaaray
March 5, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Toogashada Maxamuud Cali Xaamud oo 32-sanno jir ahaa. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Nin kufsaday gabar oo dabadeed dilay ayaa maanta oo Talaado ah dil toogasho ah lagu fuliyay gudaha magaalada Garbahaaray ee gobolka Gedo.
Ninka dilka lagu fuliyay ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamuud Cali Xaamud oo 32-sanno jir ah kaasoo kufsaday kadibna dilay gabar 18-sanno jir ah oo la dhihi jiray Xaliimo Cali Maxamed. Dhacdada ayaa bishii Janaayo ee sanadkan ka dhacday tuulada Yucubley, oo qiyaastii 15 kiilomitir dhanka bariga kaga beegan Garbahaaray, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Dilka ayaa waxa fuliyay ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya qeybtooda gobolka Gedo kadib markii gabadha aabaheed u wakiishay in ay u qisasaan ninka oo maxkamad deegaanka kutaala ku xukuntay dil.
Kufsiga ka dhanka ah gabdhaha ayaa bilihii lasoo dhaafay kordhay gudaha Soomaaliya. Bishii lasoo dhaafay ee Febaraayo gabar yar oo 12-sanno jir ah oo la dhihi jiray Caasho Ilyaas Aadan ayaa kufsi iyo dil loogu geystay gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
December 9, 2019 Maxkamada ciidamada Soomaaliya oo xukun dil ah ku riday nin loo heysto dilka haweenay shacab ah
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidanka amniga Puntland ee PSF ayaa qabtay xubno looga shaki qabo in ay xiriir la leeyihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Qoraal kooban oo ay ku daabaceen boggooda Twitter-ka, ayaa PSF ku sheegtay in [...]